Toddobada Tilmaamood ee ugu habboon ee loo baahan yahay in la sameeyo ka dib markii ay dhibaatadu ka soo gaarto Wadahadalka Sonkorowga-Macaanka
Toddobada Tilmaamood ee ugu habboon ee loo baahan yahay in la sameeyo ka dib marka uu sonkorowgu bukoodo
Waqtiga: 2020-02-27 Hits: 212
1. Barashada aqoonta ku saabsan sonkorowga
Ugu yaraan qeexitaanka soonka gulukoosta gulukoosta iyo gulukoosta dhiigga postprandial waa in la fahmo.
Sababaheehee ayaa ah soonka sare ee gulukooska dhiigga ee plasma?
Sababaheehee ayaa laga yaabaa in gulukoosta dhiig ee postprandial sare ay sababaan?
Maxaa natiijo ah oo la sababi karaa haddii gulukoosta dhiig ka dib postprandial uu sarreeyo?
Jawaabta su'aalahan waxaa lagu soo bandhigi doonaa si faahfaahsan qodobbada xigay.
2. Adeegsiga xirfadeed ee aqoonta ku saabsan cuntada
Markay arkeen koob jalaato ah, afku wuxuu u dhacaa hunguri, iyo caloosha, cunaha iyo sidoo kale carrabka ayaa diyaar u ah inay dhadhamiyaan; laakiin dhinaca kale, maskaxda caqli xumada neceb waxay ku hadashaa inay kordhinayso heerka gulukooska dhiigga marar badan.
Si kastaba ha noqotee, way fiicnaan doontaa markay jirto cod dabacsan: waxaa laguugu kalsoonahay inaad cuno jalaatada, maxaa yeelay way fiicnaan doontaa haddii aad qaadatid hal baaquli oo ka yar bariis la kariyey, ama haddii aad ordo hal saac kadib cuntada, ama haddii insulin ee XX IU la siiyo wakhtiyo badan.
Xaqiiqdi, bukaanada sokorowga ee sagacious marna ma aqbalaan talada dadka kale in congee uu si weyn u kordhin karo heerka gulukooska dhiigga oo ay tahay in wax yar la qaato oo mooska uu aad u macaan yahay oo aan la cun karin. Taa bedelkeeda, waxay isku dayi doonaan inay ku darsadaan khudaarta iyo miraha isku qalafsan marka ay kululaanayaan congee ama sidoo kale waxay yareyn doonaan qaadashada cunnooyinka adag marka ay cunayaan mooska. Adigoo adeegsanaya waxbarasho dhammaystiran iyo sahamin, sidoo kale waad gabi ahaanba tan sameyn kartaa. Ka dib markaad baratid aqoonta ku saabsan sonkorowga, waa inaad sameysaa isku-kalsooni noocaas ah.
Waxaad dhihi kartaa: "Waan garanayaa xoogaa aqoon ah oo ku saabsan cuntada, laakiin weli way adagtahay inaan si xirfad leh ugu dabaqo". Taasi waa hagaag. Waad arki kartaa haddii khibradda soo socota ay kaa caawin karto.
3. Samaynta caado jimicsi oo wanaagsan
Ku dhawaad ​​dhammaan sayidyada xakameynaya gulukooska waxay leeyihiin jecel jimicsi, sida orodka bannaanka, ku lugaynta baarkinka, orodka qoob-ka-ciyaarka, lugaynta jawaan ku xirmo lugaha, ku ciyaarista badminton, ciyaarta teniska miiska, dabaasha (xitaa dabaasha xilliga qaboobaha) iyo fuulitaanka baaskiil. Fadlan xusuusnow: kuwanu waa hiwaayadahaaga iyo caadooyinkaaga, laakiin maahan hawlihii aad mar uun qabatid.
Fadlan la kulan caajisnimadaada, ka bilow qaadista tallaabada ugu horeysa, ka dibna waxaad bilaabi doontaa safar caafimaad leh.
4. Samaynta saaxiibo dhakhtar aad u wanaagsan
Buugga Saaxiibtinimada Dhakhaatiirta Waxa qoray Mr. Wu Haiyun, oo ah dhakhtar sare oo ka tirsan waaxda cudurrada wadnaha ee cusbataalka guud ee ciidamada xoraynta dadka. Faa'iidada ugu weyn ee saaxiibo lala yeesho dhakhaatiirta ayaa ah inaad iska ilaalin karto biyo-baxa. Tusaale ahaan, waxaad si weyn kuugu qanacsan tahay dhakhaatiir la yiraahdo mucjisada ah oo dhahda waxaa jira dawo fiican oo ka yimid meel shisheeye, iyo in bukaanno badan oo cudurka macaanku joojiyaan dawada kadib markay cunaan isla markaana heerka sonkorta dhiigu sidoo kale gaarayaan heerka caadiga ah. Markii hore waxaa lagu qiimeeyay 1999 RMB laakiin hadda waa 999 RMB; Markii aad diyaar u tahay inaad iibsato, waad waydiin kartaa dhakhtarkaaga saaxiib, ka dibna caafimaadkaaga iyo lacagtaada way badbaadi karaan.
Fadlan ha dareemin in dhakhaatiirta ay aad ugu adag yihiin inay saaxiibo la sameystaan. Sida aan anigu garanayo uguyaraan, dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee qeybta cilmu-nafsiga waxay jeclaan lahaayen saaxiibo bukaanka sokorowga qaba.
5. Samaynta saaxiibo bukaan sonkorow aad u wanaagsan
Kali kuma tihid jidka sonkorowga lidka ku ah. Markaad garan weydo sida loo daweeyo waxa ku dhaca ka dib mudista insulinta, bukaanka sokorowga ayaa kuu sheegi doona in firfircoonaanta la qaboojin karo ka dib isku-darka maalin walba ee kulul ee barafka iyo shukumaan kulul.
Markaad dareento xanuun caloosha ah weyn kadib maamulka Metformin, bukaanka sokorowga ayaa kuu sheegi doona in xanuun caloosha la xallin karo ka dib marka lagu beddelo kiniiniyada isku dhafan ee Metformin.
Marka dhiigbax kacsan uu dhaco ka dib dhicitaan lama filaan ah inta lagu gudajiro safarka, bukaanka sokorowga ayaa kuu sheegi doona in boogta la bogsiin karo maalinta ku xigta kadib markii labo dhibic oo insulin ah ladiro nabarka.
Dhibaatooyin kala duwan oo aad la kulanto waxaa weligood la soo dersay bukaannada kale ee sonkorowga, tusaale ahaan, marka aad khasaare ku jirto; markii aad ka shakisan tahay nolosha sida aad qabtid hypoglycemia daran; markii aad dhibaatooyin kala kulanto; iyo markay daawooyinkaadu noqdaan kuwa aan waxtar lahayn. Waxay kuu sheegi doonaan qaababkooda iyo khibradaha ay u leeyihiin daaweynta dhibaatooyinkaas. Xaaladaha badankood, hababka qaarkood waxaa yaqaan bukaanka sokorowga oo keliya.
6. Maamulka dawooyinka si adag oo waafaqsan amarada caafimaadka
Haddii aad la kulmi karto xaqiiqda ah in sonkorowga aan la ciribtirin karin, waa inaad is dejiso, oo aad si taxaddar leh uga fikirtaa sida loo ilaaliyo nabad ku wada noolaanshaha cudurka macaanka. Isticmaalka daroogada dhab ahaan waa hab aad u muhiim ah.
Taxaddarrada soo socda waa in lagu ogaadaa isticmaalka daroogada:
1) Aqbalaada talobixinta dhakhaatiirta isbitaalada caadiga ah, oo u qaado daawada si waafaqsan amarka caafimaadka (Xusuusin: Ha aqbalin dawooyinka ay dadku ku taliyeen iyagoon haysan shahaadada dhaqtarka).
2) Ha ka walwalin in sunta qaar ay sababi karto dawo kasta. Xaqiiqdii, saameynta wanaagsan ee daroogada ay ku leedahay jirka bini aadamka ayaa ka badan saameyntooda xun; Intaa waxaa sii dheer, ku dhawaad ​​dhammaan dawooyinka suuq geynta ayaa ka gudbay ansaxinta caafimaad.
3) Ugu horeyn u fiirso saameynta dawooyinka, adoo lafa guraya natiijooyinka kormeerka ee heerka gulukoosta dhiigga (tusaale.
7. Si taxaddar leh ula dhaqan dhammaan kormeer kasta oo gulukoosta dhiigga
Sida uu sheegay bukaanka sonkorowga, dhibic dhiig oo kasta oo aad iska leedahay waa inaan la khasaarin. Natiijooyinka kormeer kasta ee gulukoosta dhiiggu waa macluumaadka la soo aruuriyey intii lagu jiray sonkorowgaaga; dagaalka waxaa lagu gaari karaa oo keliya in si taxaddar leh loola dhaqmo macluumaadka laga soo uruuriyey goobta dagaalka.
Tusaale ahaan, kiisaska badankooda, heerka gulukoosta dhiiggu wuxuu ahaa mid caadi ah bukaanka sonkorowga soo socda. Sebtember 12, heerka sonkorta dhiigga waxay ahayd 4.3 mmol / L kadib casho, oo waxay ahayd 9.8 mmol / L hurdada ka hor. Ka dib markaan bartay qiimahaas oo kale, waxaan la xiriiray sida ugu dhaqsaha badan. Wuxuu ii sheegay in maadaama khudaar aad u tiro badan la qaatay cashada, kalooriyada kuma filna, marka hypoglycemia la helo cashada ka dib, wuxuu ka walwalay in dhiig yaraanta ay dhacdo subaxa hore, sidaa darteedna uu cabo hal koob oo yoghurt ah; laakiin gulukoos dhiig oo saadaalin ahayd sare. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqooyinka soo socda ayaa lagu bartaa labadan cabir ee gulukoosta dhiigga:
Cuntada, khudradda waa inaan loo qaadin kaligood si loo sameeyo heerka gulukooska ee dhiigga inay gaaraan heer caadi ah, cuntooyinka habboonna waa in la qaataa; iyo maadaama jirka bini aadamka uu si weyn u saameeyo hal koob oo yoghurt ah, qaddarka qaadashada yogdurt-ka waxaa lagu dhimi karaa kala badh haddii xaalado la mid ah ay dhacaan marka xigta.
Sebtember 14, Gulukoos dhiig oo saadaal ah wuxuu ahaa 11.1 mmol / L. Sida casho kadib, wuxuu ciyaaray ciyaar kubbadda koleyga ah, wuxuuna dareemay dawakhaad khafiif ah; ka dibna wuxuu isla markiiba qaatay canab iyo caano fadhi, kuwaas oo sababay hyperglycemia.
Haddii heerka gulukoosta dhiiggu aanu weli fiicnayn ka dib markii la ciribtiray arrimo kale, ayaa dawadan loo xukumi karaa in aanu ku habooneyn daaweynta hadda jirta, oo dhakhtar loo arki karo dib-u-habeyn.
Markii dambe, heerkiisa gulukooska ee dhiigga ayaa noqday oo aad u fiicnaa. Xaqiiqdii, wuxuu ahaa arday dhigta dugsiga hoose dhexe markii uu ahaa 15.
Bogga Hore: Aqoonta Looga Baahan Yahay Caruurta Bukaanka qaba Sonkorowga
Bogga Dambe: Toban Sababood ee Ugu Caamsan ee Loogu Talagaley Heerka Gulukoosta Dhiigga